Nidaam-dowladeed ceynkee ah baa ku haboon dalkeenna Soomaaliya ? – Balcad.com Teyteyleey
Waa wax lala yaabo runtii inaad aragto dad Soomaali oo wax qorayo ama wax taxliilnayo, Oo hadana aad ku wareereyso cidda ay yiihin: Ma Soomaali mise Ajanabi. Waxaad kaloo ku wareereysaa diinta ay haystaan iyo cidda soo barbaarisay. Marka aad qoraa tahay ama aad wax taxliilineyso, Waa qasab runtii inaad mar walba u xagliso daanaha caamka ee dalkaaga ama aad iska aamusto. Waxaa kaloo muhiim ah inaad garaneyso taariikhda dadkaaga, If you are still looking for your Extra Super cialis at a lower price than on the most of the market, you’ve found it! Buy Extra Super cialis only for $4.2 right here! Si aad u ogaato yaa cadow, Yaase saaxiib ah ? Yaa wanaagaaga ku farxa, Yaase ka naxa ?
Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka oo gaaray Beydhabo